Amaslayidi: Idizayini Yokusebenzisana, Idizayini Yokusebenzelana Komsebenzisi, Idizayini Yesipiliyoni Somsebenzisi | Martech Zone
Amaslayidi: Idizayini Yokusebenzisana, Idizayini Yokusebenzelana Komsebenzisi, Idizayini Yesipiliyoni Somsebenzisi
NgoLwesihlanu, Okthoba 4, 2013 NgoLwesine, ngo-Okthoba 3, 2013 Douglas Karr
Bengibheka iphrojekthi yomthombo opholile impela namhlanje ebizwa ngokuthi amaslayidi lapho ungakwazi ukuhlanganisa amakhasi we-HTML ne-CSS ndawonye kusipiliyoni sombukiso wesilayidi osebenza endaweni yesikhulumi. Basebenza kumadivayisi eselula namathebulethi (ngisho nokusekela izikrini zokuthinta nesikrini esigcwele). Futhi amasilayidi agcinwa ku-inthanethi kepha angakhonjiswa ungaxhunyiwe ku-inthanethi futhi! Babuye bavumelanise neDropbox futhi kungabiwa njengoba ngenza ngezansi!
Lesi isilayidi esihle, esifushane esenziwe ngu- UJamie Cavanaugh lokho kuchaza umehluko phakathi kwe-Interaction Design (IxD), i-User Interface Design (UI) ne-User Experience Design (UX). Isifaniso samabele, isitsha kanye ne-spoon kusuka U-Ed Lea iwubuhlakani.
Tags: I-Design InteractionixdamaslayidiuiUmklamo wezehlakalo zomsebenzisiukwakheka kwesikhombimsebenzisi somsebenzisiux
I-Oct 4, i-2013 ku-1: i-15 PM
Okuthunyelwe okukhethekile, Ngiyabonga